नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : Breaking News : अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीले देश छाडे, तालिवानी विद्रोहीले नियन्त्रणमा लिए अफगानिस्तान
Breaking News : अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीले देश छाडे, तालिवानी विद्रोहीले नियन्त्रणमा लिए अफगानिस्तान
अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीले देश छाडेका छन् । रोयटर्सका अनुसार तालिवानी विद्रोहीले राजधानी नियन्त्रण गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिन सक्ने चर्चाका बीच राष्ट्रपति घानी देश
छाडेर काजिकिस्तान पुगेको जनाइएको छ । रोयटर्सका अनुसार गृहमन्त्रीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमसँग कुरा गर्दै तालिवानी प्रवक्ताले शान्तिपूर्ण रुपमा सत्ता हस्तान्तरणका लागि आफूले वार्ता गरिरहेको बताएका छन् ।
अफगानिस्तानमा तालिवानले कब्जा जमाउँदै गएपछि सरकारले शान्तिपूर्णरुपमा सत्ता हस्तान्तरणको तयारी सुरु भएको छ । देशका अधिकांस महत्वपूर्ण क्षेत्रमा कब्जा जमाइसकेका तालिवानी लडाकु अहिले राजधानी काबुलमा समेत प्रवेश गरिसकेका छन् ।
तालिवानलाई रोक्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि सरकारले वार्ताको पहल गरेको छ । तालिवानले पनि सकभर रक्तपातबिना शान्तिपूर्ण तवरले सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहेको सन्देश दिएका छन् । काबुलबाट बाहिरिन चाहने कसैलाई पनि अवरोध नगर्ने उक्त विद्रोही संगठनले जनाएको छ ।
तालिवानका एक प्रवक्ताले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘संक्रमण प्रक्रियाले पूर्णता नपाउञ्जेलसम्म काबुलको सुरक्षाको जिम्मेवारी अर्को पक्ष (सरकार) सँग छ ।’
त्यसलगत्तै अफगान सरकारले काबुलमा रक्तपात रोक्न तथा शक्ति हस्तान्तरण गर्न वार्ताहरू भइरहेको जानकारी दिएको हो ।
अफगानिस्तानका गृहमन्त्री अब्दुल सत्तार मिर्जाकवलले तालिवानले आफ्ना लडाकुलाई काबुलबाट पछि हट्न आदेश दिएको भन्दै एउटा संक्रमणकालीन सरकारलाई ‘शान्तिपूर्ण तवरले शक्तिको हस्तान्तरण गर्न’ तयारी भएको बताएका छन् ।
‘अफगानी जनताले सुर्ता गर्नु पर्दैन, शहरमा कुनै आक्रमण हुने छैन र एउटा संक्रमणकालीन सरकारलाई शान्तिपूर्ण तवरबाट शक्तिको हस्तान्तरण हुने छ,’ उनले एउटा रेकर्ड गरिएको भाषणमा भनेका छन् ।
यसअघि तालिवानले एउटा अनलाइन विज्ञप्ति जारी गरेको थियो, जसमा उसले आफ्ना लडाकुलाई काबुलको गेटभित्र नपस्न र शहरलाई बलपूर्वक कब्जामा नलिन निर्देशन दिइएको उल्लेख छ ।
‘हस्तान्तरणको प्रक्रिया बिना कुनै हताहति शान्तिपूर्ण तरिकाले हुने सुनिश्चित गर्नका लागि वार्ताहरू हुन गइरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अर्को एउटा विज्ञप्तिमा संगठनले बैंक, व्यापारी तथा उद्योगीका सम्पत्ति, पैसा र संस्थाहरमा लडाकु समूहले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने भनेर आश्वस्त तुल्याएका छन् । यद्यपि यस्तो प्रद्धिवद्धताका बाबजुद मानिसहरु आत्तिएर शहरबाट आआफ्नो घरतर्फ पलायन हुने क्रम बढेको छ ।
यसअघि चारैतर्फबाट तालिवानी लडाकु कावुलतर्फ प्रवेश गरिरहेका थिए । तर, माथिल्लो तहको निर्देशनपछि उनीहरु रोकिएको बताइएको छ । त्यसैले अहिलेसम्म देशको राजधानी शहर सरकारकै नियन्त्रणमा छ । अन्यत्र भने तालिवानले कब्जा जमाइसकेका छन् ।
अफगानिस्तानमा जारी संकटसँगै त्यहाँ रहेका विदेशी दूतावासहरू धमाधम खाली गराइएका छन् । अमेरिकाले हेलिकोप्टरमार्फत आफ्नो दूतावासका कर्मचारीहरूलाई रेस्क्यू गरेको थियो ।
तालिवानविरुद्ध अफगान सरकारको कमजोर प्रतिरोधले कूटनीति क्षेत्रलाई पनि अचम्भित तुल्याएको छ । अघिल्लो हप्तामात्रै अमेरिकी जासुसी संयन्त्रले कम्तीमा तीन महिना अफगान सरकारले तालिवानलाई रोक्न सक्ने आँकलन गरेको थियो ।
राष्ट्रपति अस्रफ घानीले शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र स्थानीय नेताहरूसँग आफू आपतकालीन परामर्शमा रहेको बताएका थिए । त्यसपश्चात भने उनी मौन बसेका छन् । समाचारहरुमा भने उनले तालिवानी कमाण्डरलाई सत्ता सुम्पने मनस्थिति बनाइसकेको उल्लेख छ ।
राजधानी काबुलमा अहिलेसम्म तालिवानले कुनै आक्रमण नगरे पनि त्यहाँ आतंकको माहोल छ । बाहिरबाट आएर बसिरहेका मानिसहरु आ-आफ्नो घर फर्किने हतारोमा छन् । विमानस्थलमा भीडभाड छ । धेरै मानिसहरू आफ्नो कार यत्तिकै सडकमा छोडेर एयरपोर्टतर्फ दौडिएको पनि समाचारमा उल्लेख छ ।
तालिवानका एक अधिकारीले लडाकुहरूलाई जितको खुशीमा बन्दुक नपड्काउन आदेश दिइएको बताएका छन् । साथै अफगानको सुरक्षा बलसँग सम्बन्धी व्यक्तिहरूलाई सकुशल घर फर्किन दिइने उनको भनाइ छ ।
अस्पताल तथा विमानस्थललाई यथावत सञ्चालन हुन दिइने तथा आपतकालीन आपूर्ति सेवाहरू पनि प्रभावित नहुने उनको भनाइ छ । विदेशी नागरिकलाई उनीहरुले चाहेको खण्डमा देश छोड्न अनुमति दिइने छ । अथवा तालिवानका प्रशासकहरूसमक्ष उनीहरूले आफ्नो उपस्थिति दर्ता गर्न सक्नेछन ।
दक्षिण एसियाली देश अफगानिस्तानमा अहिले विद्रोही समुह तालिवानको दबदबा बढेको छ । राजधानी काबुलबाहेकका धेरै महत्वपूर्ण सहरहरुमा तालिवानले कब्जा गरिसकेका छन् भने काबुलमा पनि उनीहरुको प्रवेश भएको छ ।
सन् २००१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको पालाबाट सुरु भएको अमेरिका–अफगानिस्तान युद्ध सबैभन्दा लामो हो । बुसपछि ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेनसम्म उक्त युद्ध प्रकरण लम्बिएको छ ।
डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२१ को मे महिनाभित्र सबै अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर त्यसो भएन । ट्रम्पलाई हराएर राष्ट्रपति भएका जो बाइडेनले सेप्टेम्बर ११ भित्र सबै अमेरिकी फौजलाई अफगानिस्तानबाट फिर्ता ल्याउने घोषणा गरे । उनले सेप्टेम्बर ११ नै तोक्नुको उद्देश्य सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा न्यूयोर्कको ट्वीन टावरमा अलकायदाले हमला गरेको दिन पार्नु थियो ।
त्यसपछि अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना बाहिरियो । युरोपेली सैन्य गठबन्धन न्याटोका सैनिकहरु पनि फिर्ता भए । त्यसपछि अफगानिस्तानमा तालिवानको चहलपहल बढिरहेको छ । र, अहिले दिनानुदिन अफगानिस्तानका ठूला सहर र प्रान्तीय राजधानीहरु कब्जा गरेको समाचार आइरहेका छन् । राजधानी काबुल नजिकै तालिवान पुगेको सूचना छ ।
यसबीच धेरैलाई तालिवान को हुन्, के हुन् लगायत जिज्ञासा जागेको छ । हामी १२ वटा प्रश्नोत्तरमार्फत यस्तो जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्दैछौं ।
१. के हो तालिवानको अर्थ ?
तालिवानको अर्थ र उनीहरुको व्यवहारबीच आकाश–जमिनको अन्तर छ । तालिवान शब्द पास्तु भाषाबाट बनेको हो । जसको अर्थ हुन्छ, विद्यार्थी । हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गर्नुअघि उनीहरु धार्मिक विद्यार्थीको रुपमा विभिन्न समारोहमा सहभागी हुन्थे ।
बिबिसीका अनुसार सुन्नी मुस्लिमका धार्मिक मान्यतााहरु पढाउन साउदी अरेबियाले प्रायोजन गरेका कार्यक्रमहरुमा उनीहरु सहभागी हुन्थे । तर, पछि उनीहरु हिंसात्मक गतिविधि गर्ने समूहमा परिणत भए ।
२. कहिले भयो तालिवानको उत्पत्ति ?
सन् १९९० को दशकअघि तालिवानको नाम सुनिएको थिएन । सन् १९८९ फेब्रअरीमा सोभियत संघले एक दशक लामो अफगानिस्तान बसाइ अन्त्य गरेपछि तालिवानले फैलने मौका पायो ।
सन् १९९४ मा औपचारिक रुपमा तालिवान मुल्लाह मोहमद ओमरले स्थापना गरेका थिए । ओमरको सन् २०१३ अप्रिलमा स्वास्थ्य समस्याको कारण मृत्यु भयो । कतिपयले उनको मृत्यु पाकिस्तानमा भएको बताउँछन् भने कतिपयले अफगानिस्तानमै भएको भन्छन् ।
ओमरपछि आएका मुल्ला अख्तर मन्सुर पनि सन् २०१६ को मे महिनामा अमेरिकी ड्रोन हमलामा परेर मारिए । मन्सुरको मृत्युपछि अहिले मौलावी हिबातुल्ला आखुन्जदा तालिवानको सर्वोच्च नेताको रुपमा छन् ।
३. कहिलेदेखि सुरु भयो सत्ताकब्जाको अभ्यास ?
सन् १९८९ मा सोभियत संघ अफगानिस्तानबाट बाहिरियो । त्यसपछि सोभियत संघ समर्थित वामपन्थी जनवादी प्रजातान्त्रिक पार्टी अफगानिस्तान (पिडिपिए) कमजोर बन्यो ।
सन् १९९२ मा मुजाहिदिनहरुले काबुल कब्जा गरे । पिडिपिएका राष्ट्रपति महोमद नाजिबुल्ला अपदस्त भए । ब्रिटानीका डटकमका अनुसार मुजाहिदिन भनेको अरबिक भाषामा धार्मिक गुरिल्ला हो । मुजाहिदिनले बुर्हानुदिन रब्बानीलाई सन् १९९२ मा रास्ट्रपति बनाए ।
मुजाहिदिनभित्रै आन्तरिक लफडा भयो । विभिन्न गुटहरु बने । त्यसैको फाइदा उठाउँदै तालिवानले हमला सुरु गर्यो । सन् १९९५ मा अफगानिस्तानको इरानी सीमामा पर्ने हेरात प्राप्त कब्जा गरेका तालिवानले एक वर्षपछि काबुल कब्जा गरे ।
सन् १९९८ सम्म आउँदा अफगानिस्तानको ९० प्रतिशत भूभाग तालिवानको कब्जामा परेको बिबिसीले लेखेको छ । महिला अधिकार कुण्ठित गर्ने र धार्मिक कानून लाउने तालिवानको मुद्दामा धेरै मान्छे असहमत छन् ।
४. किन ढाल्यो अमेरिकाकाले तालिवान सत्ता ?
सन् १९९६ मा सत्ताकब्जा गरेका तालिवानलाई अमेरिकाले मान्यता दिएको थिएन । सन् २००१ को अन्तिमबाट भने हमला नै सुरु गर्यो । हमला गर्नुको कारण अल कायदा कनेक्सन हो ।
सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा न्यू योर्क सहरमा जहाज अपहरण गरेर ट्वीन टावरमा हमला भयो । अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेनले हमलाको जिम्मा लिए । झण्डै तीन हजार अमेरिकी नागरिकको ज्यान गएको र अमेरिकी सुरक्षालाई चुनौती दिएको आतंककारी हमलाले अमेरिका रिसायो । र, ‘आतंवादविरुद्ध युद्ध’को घोषणा गर्यो ।
तालिवानले अल कायदालाई समर्थन र सुरक्षा गरेको आपोपमा अमेरिकाले सन् २००१ को अक्टोबर ७ बाट हमला सुरु गर्यो । डिसेम्बर पहिलो साताभित्र तालिवान सत्ता ढल्यो ।
५. कत्रो छ तालिवान फौज ?
फौजका बारेमा तालिवानले कुनै आधिकारिक तथ्यांक दिँदैन । बिबिसीका अनुसार ८५ हजार संख्याका तालिवानको फौज छ । न्यू योर्क टाइम्सले भने ७५ हजार हाराहारी भएको उल्लेख गरेको छ ।
६. तालिवानलाई प्रायोजन गर्ने देश कुन हुन् ?
सन् १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानमा तालिवान सत्ता हुँदा तीन देशले मात्रै मान्यता दिएका थिए, पाकिस्तान, युएई र साउदी अरेबियाले ।
सोभियत संघ अफगानिस्तानमा हुँदा तालिवान र मुजाहिदिनलाई सहयोग गरेको अमेरिकाले सोभियत संघ फर्केपछि तालिवानको सत्ता आउँदा भने मान्यता दिएन । थुप्रै अन्तरवार्ताहरुमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले तालिवान र मुजाहिदिन उत्पादनमा अमेरिकी हात रहेको बताएका छन् ।
७. अफगान सरकारमाथि तालिवान हाबी हुनुको कारण के हो ?
अमेरिकी र न्याटो सैनिक फिर्ता हुनासाथ तालिवानले अफगान सरकारलाई धेरै दबाबमा राखेको छ । ३४ प्रान्त भएको अफगानिस्तानका अधिकांश प्रान्त कब्जा गरेको तालिवान संघीय राजधानी काबुल नजिकै पुगिसकेको छ ।
न्यू योर्क टाइम्सका अनुसार ८३ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेर अफगानी फौजमा तालिम दिइएको थियो । तर, तालिमको विज्ञापन जस्तो नतिजा आएको छैन । धेरै अफगानी सैनिकले आत्मसर्पण गरे । उनीहरु सिमावर्ती देशमा भएको भीडन्तबाट भागेर छिमेकी देश ताजाकिस्तान पुगेका थिए ।
अफगान सरकारसँग सेना, प्रहरी र हवाई दस्ता गरी तीन लाख फौज भएको मानिन्छ । तर, फौजलाई आवश्यक तलव, सुविधा र हौसला नभएर समस्या भएको विभिन्न संचारमाध्यमले लेखेका छन् ।
महिनौंसम्म तलवविहीन भएर सुरक्षाकर्मीले काम गर्नुपरेको, युद्धमा जाँदा आवश्यक खानपिनको व्यवस्था नभएको र व्यापक भ्रस्टचार भएकोले अफगानी फौज ठूलो भएर पनि नजिता नदेखिएको बताइन्छ ।
अफगानिस्तानको सबैभन्दा ठूलो समुदाय पास्तुनको फौज भएकोले पनि तालिवान बलियो भएको कतिपयको भनाइ छ । तालिवानविरुद्ध विभिन्न जातिगत मोर्चाहरु पनि छन्, अफगाानिस्तानमा । तर, तालिवानको अगाडि उनीहरुको शक्ति रुपमा कमजोर छ ।
तालिवान अफगानिस्तानमा मात्रै हाबी भएको छैन । एकताका पाकिस्तानको उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा समेत हाबी भएका थिए । सन् २०१२ को अक्टोबरमा पानिस्तानी तालिवानले मलाला युसुफजाई विद्यालयबाट घर फर्कदाँ गोली हानेको घटना चर्चित भयो ।
मलालले नोबेल शान्ती पुरस्कारसमेत पाइन् । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा पाकिस्तानी सैन्य हमलाले पाकिस्तानी तालिवानलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेको छ । पाकिस्तानमा अफगानिस्तानमा जस्तो प्रभावशाली छैनन् तालिवान ।
८. तालिवान, अल कायदा र आईएसआइमा के फरक छ ?
तालिवान मुलतः अफगानिस्तान केन्द्रित छ । उनीहरु विदेशी फौज अफगानिस्तानबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, अल कायदा र आईएसआइ भने अन्तर्राष्ट्रिय समूह हुन । तर, युरोप र अमेरिकाको विरोध गर्ने लाइनमा भने उनीहरुको मिल्ती देखिन्छ ।
कार्नेगी इन्डोमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिस नामक थिंक ट्यांकका अनुसार तालिवान संस्थापक मुल्ला ओमार र अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेनको परिवारबीचमा वैवाहित सम्बन्ध थियो ।
९. तालिवानको आम्दानीको स्रोत के हो ?
सिया मुस्लिमको कठोर कानून सरिया लागू गरेर सत्ताकब्जा गर्ने तालिवानको मूल मान्यता हो । उनीहरुलाई त्यो मान्यता राख्ने देश तथा व्यक्ति समूहले सहयोग गर्ने गरेका छन् ।
तालिवानहरु आफूलाई इस्लामिक इमिरेट अफ अफगानिस्तान भन्छन् । उनीहरुको आम्दानीको अर्को स्रोत भनेको अफिमलगायतका लागूऔषधबाट लिइने कर हो । तालिवानले अफिम खेती र बिक्रीबापत दश प्रतिशत कर लिने विभिन्न मिडियाहरुले लेखेका छन् । कब्जा गरेको क्षेत्रमा भएका विभिन्न कारोबारबाट कर लिएर तालिवानले आम्दानी गर्दै आएको छ ।
१०. कहिले भयो अमेरिका–तालिवान वार्ता ?
तालिवानले सन् २०१३ को जुन महिनामा कतारको राजधानी दोहामा आफ्नो कार्यालय खोले । त्यसपछि कतारको समन्वयमा अमेरिकी अधिकारीसँग अनौपचारिक वार्ता भएको मानिन्छ ।
अमेरिकासँग पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता र शान्ति सम्झौता २०२० को फेब्रअरी २९ मा भयो । उक्त वार्तापछि अमेरिकी र न्याटो सैनिक पोस्टमा तालिवान आक्रमण घट्यो तर अफगान सरकारसँग भने बढ्यो । जुन अहिले झन् धेरै परिणाममा जारी छ ।
११. किन सशंकित छन् रुस, चीन र भारत ?
अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा आउँदा सबैभन्दा धेरै विरोध गर्ने देश थिए, रुस र चीन । तर, अहिले उनीहरुलाई नै अमेरिकी सेना फर्किएपछि तनाव भएको छ । अफागानिस्तानमा भएको अस्थिरतमा मध्यएसिया जाने र आफूलाई समस्या हुने रुसको चिन्ता छ ।
सीमा जोडिएको देश चीन–अफगान अस्थिरताले आफ्नो झिनजिझाङ प्रान्त झन् अस्थिर हुने चिन्ता चीनको छ । यही चिन्ता चिर्न तालिवान नेताहरुले मस्को र बेइजिङ गएर वार्ता गरेका थिए ।
भारत तालिवान सत्ता आएपछि कास्मिरमा थप तनाव बढ्ने चिन्तामा छ । त्यहीं चिन्ताका कारण सन् १९९६ मा तालिवान सत्ता आउँदा मान्यता नदिएको भारत अहिले विभिन्न अनौपचारिक च्यानलबाट तालिवानसँग सम्पर्कमा भएको भारतीय मिडियाहरुले नै लेखेका छन् ।
१२. के हो नेपाली गोर्खा सैनिक कनेक्सन ?
मूलतः अफगानिस्तान अमेरिकी युद्धमैदान हो, जहाँ सुरुदेखि नै बेलायत सहभागी भयो । रोयटर्सका अनुसार ८१०० बेलायती सैनिक अफगानिस्तानमा खटिएका थिए ।
सन् २०१४ को अक्टोबरमा बेलायतले आफ्ना फौजलाई फिर्ता लग्यो । ७०० सैनिक भने न्याटोको सदस्यको रुपमा कार्यरत रहिरहे । उनीहरु पनि पछि न्याटोसँगै फिर्ता भए ।
अलजजिराका अनुसार अफगान युद्धमा ४५७ सैनिकको ज्यान गएको छ, जसमा नेपाली गोर्खा सैनिक पनि छन् । सबैभन्दा पहिले ज्यान गुमाउने गोर्खा सैनिक हुन् युवराज राई । उनको अफगानिस्तानको दक्षिणी प्रान्त हेल्मन्डमा २८ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ । उनी सन् २००८ नोभेम्बर ४ मा मारिएका थिए ।
गोर्खालीको मृत्युसँगै बहादुरीको कथा पनि आयो, अफगानिस्तानमा । अट्याक्टिङ सार्जन्ट दीपप्रसाद पुनले भिक्टोरिया क्रसपछिको दोस्रो ठूलो पदक कन्सपिक्युअस ग्यालन्ट्री बेलायती महारानीबाट पाएका थिए । सन् २०१० को सेप्टेम्बर १७ मा आफ्नो पोस्टमा एक्लै हुँदा तीस तालिवानसँग बहादुरीपूर्वक भिडेकोमा उनले पदक पाएका हुन् । - नेपाल प्रेस